Madaxweynaha Soomaaliya oo Markii ugu horeysay ku sugan Dalka Suudaan – SBC
Madaxweynaha Soomaaliya oo Markii ugu horeysay ku sugan Dalka Suudaan
Posted by Webmaster on Janaayo 1, 2013 Comments
Madaxweynaha Dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka amba baxay Garoonka diyaaradaha Magaalada Caasimada ah ee Mqudisho halkaas oo ay ka raaceen wafdi ka mid ah golaha wasiirada Xukuumada ah.
Safarka madaxweynaha ayaa waxa uu ku jahnaa dhanka iyo dalka Suudaan halkaas oo uu uga qeyb gali doono Xaflad lagu maamuusayo xiligii ay dowlada dalkaasi Xornimada sida buuxda uga qaateen dowladii gumeysaneysay ee Ingriiska.
Wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in Madaxweyne Xasan Sheekh iyo wafdigiisa ay gaareen dalkaasi Suudaan islamarkaana siweyn loogu soo dhaweeyay deegaan lagu magacaabo Damaaziin oo ka tirsan gobolka Blue Niil ee dalkaasi .
Waxa Uu Madaxweynuhu halkaasi kaga qeyb galay Mashruuc biyo xireen halkaasi xariga looga jarayay, iyadoo lagu wado in si toos ah ay u bilaabato xafladaha lagu xusayo 57sano guuradii ka soo wareegtay xornimada dalkaasi islamarkaana uu ka qeyb galo.
Dalka Sudaan waa Dal saaxiib la ah dowlada Soomaalida, waxaana dalkaasi ku sugan boqolaal arday Soomaali ah oo halkaasi u jooga waxbarashada heerarkeeda kala duwan.